Cabdi Iley Oo Shalay Markii Afraad La Hor Geeyey Maxkamadda Sare Ee Itoobiya Iyo Weedhihii Uu Isku Difaacay | Himilo Media Group
Cabdi Iley Oo Shalay Markii Afraad La Hor Geeyey Maxkamadda Sare Ee Itoobiya Iyo Weedhihii Uu Isku Difaacay
Eedaynta Xeer-ilaalinta, Codsigii Garyaqaannada, Dalabkii Maxkamadda iyo Aminta fadhi kale oo loo muddeeyey
Addis Ababa, 07 Feb, 2019 (Himilo)-Madaxweynihii hore ee Dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley), ayaa mar kale la hor geeyey Maxkamad ku taalla magaaalada Addis Ababa Arbacadii shalay, waxaana maxkamadda horteeda fursad loogu siiyey inuu ka hadlo sida uu u arko dambiyada loo haysto ee uu u xidhan yahay.
Cabdi Iley ayaa la xidhay bishii August ee sannadkii hore kaddib markii Xeer-ilaaliyaha Guud ee Dowladda Federaalka Itoobiya ku soo oogtay dambiyo la xidhiidha tacaddiyo loo geystay dad shacab ah, isku-dhacyo dhex maray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada, bannaan-baxyo gallaaftay nolosha dad iyo hanti badan oo ka dhacay magaalada Jigjiga isla bishii August 2018-dii. Iyadoo muddadii uu xidhnaa ay soo baxeen meydadka dad la xasuuqay oo la soo faqay, taasoo sii xoojisay dambiyada loo haysto oo maxkamadda horteeda la geeyey dhowr jeer.
Haddaba, maxkamadda Sare ee Federaalka Itoobiya oo markii Afraad shalay la hor geeyey, waxa uu Cabdi Maxamuud Cumar ka hor sheegay inaanay gebi ahaanba waxba ka jirin isla markaana been-abuur yihiin eedaymaha loo haysto oo ay ku weheliyaan 46 qof badankoodu ay dibad-joog yihiin marka laga reebo Lix qof oo uu ku jiro Cabdi Maxamuud Cumar, sida ay qortay majaladda Addis Standard oo aanu warkan ka soo xigannay.
Muddaynta fadhiga Maxkamadda ee shalay lagu qaaday dhegaysiga Dacwadaha loo haysto Cabdi Iley, ayaa ka dambeeyey markii uu baaqday fadhi maxkamaddu yeelatay 30-kii January, kaddib markii ay fadhiga ka soo xaadiri waayeen gar-yaqaanadii difaacayey eedaysanayaasha oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen Isku-dhacyo dhexmaray qoomiyadaha iyo sidoo Isku-day lagaga hor yimi Ku-dhaqanka Dastuurka u yaalla waddankaas.
Cabdi Maxamuud Cumar oo garsoorayaasha Maxakamaddu weydiiyeen inuu qirsan yahay dambiyada loo haysto, waxa uu u sheegay inuu dhammaantood u aqoon yahay kiisas been-abuur ah oo si ku-talo-gal ah loogu eedeeyey.
Sida Maxkamadda laga hor sheegay 47 qof ayaa ku eedaysan kiisas Isku mid ah, balse waxa gacanta ciidammada Ammaanka ku jira Lix Qof oo magacyadooda lagu kala sheegay Cabdi Iley, madaxii hay’adda Dumar iyo Carruurta Raxma Maxamed Haybe, Madaxii hay’dda Arrimaha Qurbejoogga Cabdirisaaq Cilmi, Madaxii ciidammada Booliska Farxaan Daahir iyo laba qof oo magacyadoodu kala yihiin Warsame Cabdi iyo Guuleed Caadil. Waxase Xeer ilaalintu fadhigii shalay maxkamadda ka hor sheegeen inay ku hawlan yihiin sidii ay Maxkamadda horteeda u keeni lahaayeen eedaysanayaasha maqan, balse waxay dalbadeen in la siiyo wakhti ay ku soo dhammaystaan hawlahooda.
Fadhiga shalay ee Maxkamadda oo aan lagu dhegaysan Wax is-difaac ah oo eedaysanayaashu ka yidhaadeen kiisaska loo haysto marka laga reebo Cabdi Iley, waxa mar kale loo muddeeyey fadhi kale oo Maxkamaddu ku dhegaysato kiiskooda 27-ka Bishan.
Hase yeeshee, garyaqaannada u doodayay eedaysanayaasha ayaa maxkamadda u gudbiyey cabashooyin ay ka qabaan dacwadda Xeer-ilaalinta oo ay ku tilmaameen inay baalmarsan tahay nidaamka sharci, iyagoo tilmaamay in aanay Xeer ilaalintu gal-dacwadeedka ku lifaaqin liiska dadka markhaatiga ah ee loo hayo dacwadda Eedaysanayaasha. Waxaanay Maxkamaddu ku amartay xeer-ilaalinta inay soo gudbiyaan jawaabta cabashada garyaqaannadu u gudbiyeen si ay go’aan uga gaadho arrintan badhtamaha Bishan ka hor fadhiga loo ballansan yahay dhegaysiga dacwadda.
Xafiiska Xeer-ilaalinta Guud ee Federaalka Itoobiya, ayaa 25-kii bishan shaaciyey in rabashadihii ka dhacay magaalada Jigjiga bishii August ay sababeen dhimashada 58 qof, halka sidoo kale 266 ku dhaawacmeen. Warbixinta ka soo baxday Xafiiska Xeer-ilaalinta oo lagu shaaciyey dhacdooyin kale oo aan hore loo ogeyn balse lagu lifaaqay dacwadda loo haysto Cabdi Iley, ayaa lagu ogaaday xabaalo-wadareedyo ay ku jiraan meydadka 42 qof.
Waxa kale oo warbixinta xeer ilaalinta lagu sheegay in rabshadahaasi sababeen kufsi loo geystay toban haween ah iyo sidoo kale burburka hanti lagu qiimeeyey 421 Milyan oo Bir.